Kulanka lawada sugayo ee Barcelona iyo Sporting Gijon | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kulanka lawada sugayo ee Barcelona iyo Sporting Gijon
Kulanka lawada sugayo ee Barcelona iyo Sporting Gijon
Posted by: radio himilo March 1, 2017
Muqdisho – Barcelona ayaa ku soo laabtay garoomada Primera Division habeenkan Arbacadaah kulan ay gurigeeda Camp Nou ku qaabilayaan Kooxda dhibtoonysa ee Sporting Gijon .
Luis Enrique ayaa xaqiijisatay Kulankii adkaa oo huul dirqi ah oo 2-1 kaga badiyeen Atletico Madrid Axadii oo ku sii haysay in keliya hal dhibic ka danbeeyaan Real Madrid oo hogaanka kaga heysa ka dib markii Los Blancos ay la timid isla habeenkaas kuu markii ay ku garaacday Villarreal 3-2.
Kooxda Zinedine Zidane ayaa weli hal kulan u baaqi ah , laakiin Barca ayaa guuri karta booska 1aad waa hadii ay guul ka garaan Kooxda Sporting, iyadoo Real ay ku qasbanaan doonto in ay tallaabo u qaadaan marka ay gurigooda ku casuumaan Las Palmas.
Aleix Vidal ayaa garoomada inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ka maqnanaya ka dib dhaawac canqowga oo soo gaaray kulankii ugu dambeeyey ee Alaves iyo Barcelona.
Javier Mascherano iyo Arda Turan ayaa la heli karaa mar kale ka dib markii uu dhaawac soo gaaray labada ciyaar yahan ayaa ciyaari doono kulanka Sporting.
Tababaraha Barcelona Luis Enrique ayaa heysta koox taam ah uu ka soo xusho Shaxdiisa marka laga reebo xidiga mudada dheer kaga maqan dhaawaca ee Vidal , kooxda Catalan ayaan lahayn ciyaartoyda kaga maqan ganaax kulankan.
Si kastaba ha ahaatee, Gerard Pique ayaa kaliya hal jaale u jira oo ka soo gaaro ganaax hal kulan.
Jorge Mere kaliya ayaa ganaax ku maqan ka dib markii uu casaan qaatay kulankii ay 1-1ka garoonkooda kula galeen Celta Vigo isbuucaan, laakiin Rubi ayaan qabin wax dhaawac cusub ah ka hor safarka ay ku tagayaan Camp Nou.
Barcelona ayaa dhalisay 145 gool 44 kulan ee ugu danbeysay ee La Liga ee Camp Nou ku ciyaartay , celcelis ahaan kulankiiba 3,29. kooxda kaliya ee shabaqeeda gool ka ilaashatay ee garoonka Camp Nou ee mudadaas ayaa ahaayeen Malaga (labo jeer).
Sporting ayaa badisay kaliya hal kulan 42 kulan oo ay booqatay Camp Nou La Liga – 4-0 bishii Febraayo 1987. Asturians ayaa barbaro galay afar ka mid ah kuwaa 37 jeer waa laga badiyay ee u safarto Barcelona Primera Division.
Luis Enrique ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee Sporting ee ka dhaliyo Gool Barcelona labadii kulan ee La Liga hal xilli ciyaareed waana (1990-91).
Lionel Messi ayaa kasbaday dhibcaha ugu badan ee kooxda oo ka badan ciyaaryahan kale oo La Liga (12 dhibcood, iyadoo 20 gool uu un dhaliyay ) xilli ciyaareedkan.
Kulanka: Barcelona v Sporting Gijon
Waqtiga: 9:30pm Saacada Geeska Afrika
Previous: Kulanka Real Madrid iyo Las Palmas ee horyaalka La Liga
Next: Haweeney Bisadaha gabaad ku siisa aqalkeeda si aysan qabow ugu dhiman